Marais Onyinye Onyinye Maka Achicha - Imewe Mmewe
Onyinye Onyinye Maka Achicha
Onyinye Onyinye Maka Achicha Nkwakọ onyinye maka achịcha (ego). Foto a na-egosi igbe achicha achicha iri na ise (oct achị abụọ). Ọtụtụ mgbe, igbe onyinye na-akwụ n'usoro achịcha niile nke ọma. Ka osi di, igbe ndi eji eme achicha n’otu n’otu di iche. ha belata ego site na-elekwasị anya naanị otu ihe, ma na-eji ihe isii ahụ emegharị, ha na-enwe ike ịtụgharị ụdị keyboard niile. N'iji imewe a, ha nwere ike imepụta nha keyboard ọ bụla, site na obere mkpọchi, ruo na nnukwu pianos 88-zuru ezu, na ọbụna ibu. Dịka ọmụmaatụ, maka otu octave nke igodo 13, ha na-eji achịcha 8. Nnukwu piano dị mkpa 88 ga-abụ igbe onyinye achịcha 52.
Aha oru ngo : Marais, Aha ndị na-emepụta ya : Kazuaki Kawahara, Aha onye ahịa : Latona Marketing Inc..
Onyinye Onyinye Maka Achicha Kazuaki Kawahara Marais